प्रयोग भइसकेको क’ण्ड’म बटुलेर यी महिलाले गर्थिन यस्तो काम’ थाह पाउदा प्रहरी पर्यो चकित् !
साउन २७, २०७८ बुधबार 68
मानिसले पैसा कमाउन अनेकौ उपाय अपनाउने गरेका छन् । कसैका अनौठा शोख पनि हुन्छन् । जसले मानिसलाई अचम्म बनाउँछ । पैसा कमाउन एक जना महिलाले अपनाएको उपायले प्रहरीलाई पनि चकित् बनाएको छ । उनले केही ब्यक्तिको सहयोगमा प्रयोग भइसकेको क ण्ड म भेला पारेर पुन बेच्ने गरेकी थिइन् । *****याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस*****,
दक्षिण पूर्वी एशियाली देश भियतनाममा एक महिलाले यस्तो काम गर्ने गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । प्रहरीले प्रयोगमा आइसकेका ३ लाख २५ हजार क ण्ड म बरामद गरेको छ । यी क न्ड मलाई पानीमा धोएर नयाँ क ण्ड म भन्दै बेच्ने गरिएको थियो । यो क ण्ड म देशको दक्षिणी प्रानत बिन्ह दुओङस्थित एक गोदाममा एक दर्जन ब्यागमा भरेर राखिएको थियो ।
भियतनामको सरकारी टिभी च्यानल विटीभीको रिपोर्टअनुसार प्रहरीले क न्ड मले भरिएका यी ब्याग सहित महिलालाई पक्राउ गरेको हो । जसको वजन ३ सय ६० किलो छ । यस गोदामका मालिकले उनले अज्ञात ब्यक्तिवाट प्रयोगमा आइसकेका क ण्ड म किनेर फेरी बेच्ने गरेका थिए । त्यसलाई धोइपखाली गरेर बेच्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानवाट खुलेको छ । पक्राउ परेकी एक महिलाले दिएको बयानअनुसार प्रयोग भइसकेका यी क ण्ड मलाई पहिलो उ म्लि एको पानीमा हा ल्ने गरिन्थ्यों, त्यसपछि सुकाइन्थ्यों ।
महिलाका अनुसार त्यसपछि यस क ण्ड मलाई काठको लि ङ्गमा राखेर फेरि पुरानै आकार दिएर नयाँ जस्तै बनाइन्थ्यो । त्यसपछि फेरि प्याकेटमा भरेर बेच्ने गरिन्थ्यों । टिभी च्यानलका अनुसार प्रयोगमा आएका यस्ता कति क ण्ड म फेरि बिक्री भयो भन्ने विषय अहिले खुलेको छैन । महिलाका अनुसार उनले जति किलो क ण्ड म बनाउथिंन्, त्यहीअनुसार पैसा आउथ्यों ।*भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस**
अस्ट्रेलियामा ८५ वर्षकी वृद्ध महिलासँग लाखौं ठग्ने नेपाली जोडी जेल चलान अस्ट्रेलियामा एक अन्तर्राष्ट्रिय ठगी गिरोहका सदस्य रहेका २ जना नेपाली पक्राउ परेका छन् । पश्चिमी सिड्नीकी एक वृद्ध महिलासँग हजारौं डलर ठगी गरेका यी दुईलाई सिड्नी अदालतमा उपस्थित गराइयो । पुलिसले २२ वर्षकी नेहा गिरी र १९ वर्षका आयुष भट्टराईलाई स्थानीय समयअनुसार सोमबार अपरान्ह साढे ४ बजे टेलोपियामा एक घरबाहिरबाट पक्राउ गरेको थियो ।
अस्ट्रेलियाको समाचार वेबसाइट नाइनन्यूजका अनुसार यी दुईलाई बेइमानी र धोखाधडीबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको ५ वटा आरोप र जानीजानी आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको ३ वटा आरोप लागेको छ । उनीहरुले ८५ वर्षकी एक महिलालाई झुक्याएर हजारौं डलर ठगी गरेका थिए । **यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस*
बताइएअनुसार पीडित ८५ वर्षकी महिलालाई एउटा फोन कल आएको थियो । फोन गर्नेले आफू उनको बैंकबाट बोलेको भन्दै उनको बैंक खाता रोक्का भएकोले उनले अर्को खाता खोल्नुपर्ने बताएका थिए । फोन गर्नेले महिलालाई एक कुरियरलाई ३ हजार डलर दिन भनेका थिए । कुरियरका कर्मचारी महिलाको घरमै आउने र त्यो रकम उनको खातामा जम्मा गरिने बताइएको थियो ।
महिलाले कुरियल वालालाई ३ हजार डलर दिइन् र यसबारे पुलिसलाई पनि जानकारी दिइन् । पछि महिलालाई फेरि अर्को फोन कल आयो । फोन गर्नेले उनलाई अझै ५ हजार डलर दिनुपर्ने बताए । पुलिसले नेपाली जोडीलाई सोमबार ती महिलाको घरमा पैसा लिन आएको बेला पक्राउ गरेको हो ।**तल क्लिक गर्नुहोस*
गिरी र भट्टराईलाई मंगलबार पारामाट्टाको स्थानीय अदालतमा मजिस्ट्रेट रोबिन डेनेरको अगाडि उपस्थित गराइएको थियो । अदालतमा यी दुवैले जमानतको लागि अर्को प्रयासस्वरुप कुनै आवेदन नगरेको बताइएको छ । उनीहरुको जमानत अदालतले पहिले नै खारेज गरिसकेको थियो । उनीहरुलाई अदालतले जेल पठाएको छ र अब उनीहरुलाई अगष्ट २० मा फेरि अदालतमा उपस्थित गराइनेछ ।*भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस**
Prevमोरङमा आमाले ‘केटासंग फोनमा धेरै कुरा नगर’ भनेर सम्झाइन्, रिसाएर हिँडेकी १६ वर्षकी छोरी २० हजार भारुमा …?
Nextलाईसेन्स बनाउन नयाँ नियम, अब यति सजिलै बन्नेछ, अवश्य पढौ
एक व्यक्तिको नि’धनले गाँउनै शाेकमा, ४६ जनाले गरे एकै ठाउँमा काजक्रिया
काठमाडौं उडेको बुद्ध एयरको जहाजको टायरको हावा खुस्कियो
अन्तिम पत्रमा : `म तिमीलाई छाडेर जान सक्दिन` मात्रै भनेको भए मैले मर्नुपर्ने थिएन